बढ्दो साईवर क्राईम कसले रोक्ने ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
संगै बाच्ने संगै मर्ने बाचा गरी ७ फेरा लाएका श्रीमानले नै श्रीमतिको बदानाम गर्दै हिडे कसको के लाग्छ ? एक अर्का प्रतिको विश्वास न हो यो सम्बन्ध तर आफ्नै श्रीमानले जब पवित्र सम्बन्ध र विश्वासलाई दुरुप्रयोग गरेर आफ्नै श्रीमतीलाई संसार सामु नागंो पारीदिन्छ यसको पिडा कति अश्यीय होला । हो यस्तै अश्यय पिडाले छटपटाइरहेकी छिन् पोखराकी सुनिता जिसी । चितवन माणीका विपिन अधिकारीसंग फेसवुकबाटै प्रेममा परेकी उनले दुवै परिवारको सहमतीमै बिवाह गरिन् । विहे पछि रोजगारीका लागि उन्का श्रीमान मलेसिया गए । तर सुखी भवीष्यको सपना देखाएर विदेशीएका तिनै विपिनले अहिले सुनीतालाइ पल पल मारीरहेका छन् । जुन फेसबुकबाट बिपीनसँग प्रेम बस्यो र बिहे भयो अहिले तिनै विपीनले फेसबुक मार्फत सुनीतालाई मर्नु न बाँच्नु बनाएका छन् । विपिनले उनको नाममा धेरै नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर उन टाउको जोडेर नंग्न तस्विर भाइरल बनाइरहेका छन् । यहि कारण उनि पटक पटक आत्महत्याको प्रयास समेत गरीन ।